ယုတ်နှင့်ကန့်သတ်ကျော်နည်းနည်းဖြစ်ကြောင်းအများအပြားရုပ်ပြောင်ဂိမ်းဖြစ်ကြောင်းအများအပြားမျိုးရှိပါတယ်။ သို့သော်အပူဆုံးနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပြောင်များ၏အရှိဆုံးအရှုပ်တော်ပုံနယ်ပယ်တစ်ခုမှာငါ့အနည်းနည်းမြင်းစီးရီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်အစွန်းရောက်ဂန္မူရင်းခြီးမှမျးကနေမြင်းဇာတ်ကောင်များအတွက်ခြီးမှမျးနေသောပရိသတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ရုံအစဉ်အဆက်အနင်း၌မိမိတို့အကြိုက်ဆုံးမြင်းကလေးပျော်မွေ့ချင်သူကိုချောင်းဆိုးရင်ကျပ်၏သန်းပေါင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်,သင်ဝက်ဘ်ပေါ်မှာရှိသမျှနောက်ဆုံးပေါ်ဘာသာပြန်ဂိမ်းကိုရှာဖွေနိုင်သည့်အတွက်ဒီအသစ်ကလိင်ဂိမ်းစုဆောင်းမှုထက်မကထပ်မံကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။, အခမဲ့အကြှနျုပျ၏နည်းနည်းမြင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုသင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှအပေါငျးတို့သဇာတ်ကောင်နှင့်အတူရုပ်ပြောင်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အပူဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းများမှာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးတွင်ဖုံးအုပ်အဖြစ်သေားအားလုံးနှင့်အဓိကအမျိုးအစားငယ်၊အားလုံးဇာတ်ကောင်အတွက်စုဆောင်းကြသည်နှစ်ဦးစလုံးနာမည်ကြီးငယ်မှအ MLP ကမ္ဘာ၏ရေကူးဝတ်စုံတို့စတိုင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းနှင့်စွမ်းအင်၏အမွှေးနှင့်ၡမ်ား ponies။
အမွားမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလာျပီးမစစ္ေဆးထားပါ။ အဘယ်သူမျှမမျက်တောင်ခတ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်,ဒါကြောင့်သင်ကအချို့သောအတွေးတွေကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟုရုပ်ပြောင်မှကြွလာသောအခါလုံးဝအရှက်မရှိသောဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်. အဘယ်သူမျှမဂိမ်းကန့်သတ်ရှိပါတယ်,ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းအပြည့်အဝအတွက်လာမယ့်အတူ,အခမဲ့နှင့်ပူးတွဲမျှကြိုးနှင့်အတူ. ထိုအသင်ဂိမ်းကစားနိုင်သည့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင်၏တက်ဘလက်ပေါ်တွင်သင်၏ဘရောက်ဇာသို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အနည်းငယ်သောမြင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုအခမဲ့ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရဲ့စုဆောင်းမှုမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
လူအပေါင်းတို့သည်ကာတွန်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပြောင်ပြစ်မှားကြောင်းအခြားမည်သည့်လူကြိုက်များစီးရီးထဲက,ငါသည်ငါ့နည်းနည်းမြင်းအများဆုံးမကြာခဏညစ်ပတ်အရေးယူသို့လှည့်တယ်သောတဦးတည်းဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ လိင်ဂိမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်တုန်းကမှဂိမ်းတွေမဆော့ဖူးဘူး။ ကလေးမွေးဖို့သင့်လိုအပ်ချက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ဂိမ်းများ၊သင်ကလေးနှင့်အတူစွန့်စားသွားပျော်မွေ့နိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းများ၊ပူလစ်ဇာစာပေနှင့်အတူပူလစ်ဇာစာပေကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်ပင်ဂိမ်းများ။
အဆိုပါလိင်ဂိမ်းနည်းနည်းပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရုံလိင်ထက်ပိုအတူလာကြ၏။ သူတို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု,သင်အမှန်တကယ်အားလုံးသင့်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးဝင်ငွေနေသကဲ့သို့သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ခံစားရရန်အမှုအရာ,လာကြ၏။ အကယ်၍သင်သည်အဲလစ်ဇဘက်၏ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်လျှင်အဲလစ်ဇဘက်၏ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်လျှင်အဲလစ်ဇဘက်သည်မည်မျှထွက်သည်ကိုသင်သိသည်။ ယခုအချိန်တွင်အပေါငျးတို့သအကောင်းဆုံးပုံပြင်များသင်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအဖြစ်စကြဝဠာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အတွက်အချို့အမာခံစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းသို့လှည့်ခဲ့ကြသည်။ သင်တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုများကဲ့သို့ပုံပြင်များတွေ့ကြုံခံစားရလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်သင်ထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်တဦးတည်း။, တဖန်သင်တို့တစ်ဇာတ်သိမ်းသင့်ရဲ့ကြင်နာဆီသို့ဂိမ်းခုတ်မောင်းနိုင်ပါတယ်။ များစွာသောအခြားအမျိုးအည့္ဒီ MLP ဇာတ်ကောင်အပေါ်။ သင်ရုံကြည့်ဖို့ရှိသည်။
ကျနော်တို့ခေါင်းစဉ်အပေါ်အမာခံလိင်ဂိမ်း၏အကြီးမားဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်များ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်အရာအားလုံးကဂိမ်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်နှစ်ဦးစလုံး၏လုံလောက်သောအရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းသေချာအောင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ကိုလည်းမှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြား၌သင်တို့ကိုအခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်သည့်မှတဆင့်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆုိက္အတြက္လုိအပ္တာအားလုံးရွိသလုိသင့္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆုိက္အတြက္လုိအပ္တာအားလုံးရွိသလုိသင့္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆုိက္အတြက္လုိအပ္တာအားလုံးကုိသင့္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။